Mikel Arteta oo ka hadlay wararka Arsenal la xiriirinaya heshiiska Francisco Isco – Gool FM
Mikel Arteta oo ka hadlay wararka Arsenal la xiriirinaya heshiiska Francisco Isco
(London) 30 Dis 2020. Tababaraha reer Spain iyo kooxda Arsenal ee Mikel Arteta, ayaa ka jawaabay warka sheegaya in kooxdiisa ay la soo saxiixan doonto xiddiga naadiga Real Madrid ee Francisco Isco, suuqa furmi doono bisha January ee soo socota.
Francisco Isco oo 28 jir ah, ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo Real Madrid xagaaga soo socda, maadaama uu lumiyay kalsoonida tababarihiisa Zinedine Zidane, kaasoo qadkiisa dhexe u adeegsadaa saddexda xiddig kala ah Kroos, Modric iyo Casemiro.
Waxaa la soo wariyay in Arsenal ay tahay kooxda ugu dhow ee la saxiixan karta Francisco Isco, kaddib codsi ka yimid Arteta, kaasoo shaqsiyan uga jawaabay warkan.
“Natiijooyinka ugu dambeeyay ma badali doonaan qaabka aan ula dhaqmayno suuqa kala iibsiga.” Arteta ayaa sidaa ku yiri hadal uu daabacay wargeyska “Mirror” ee dalka England.
“Way iska cadahay inaanan ka hadli karin ciyaartoyda gaarka ah.”
RASMI: Barcelona oo ka hadashay nooca uu yahay dhaawaca soo gaaray Philippe Coutinho